सम्भव छैन देउवा बिनाको कांग्रेस ? - नेपालबहस
सम्भव छैन देउवा बिनाको कांग्रेस ?
| ११:३६:५६ मा प्रकाशित
बल्लतल्ल हुने चर्चा थालिएको नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन फेरि नेताहरुकै मिलेमतोमा आउने भदौसम्मका लागि सार्ने लगभग निश्चित भएको छ । कोरोना महामारीको कारण देखाएर नेताहरु फेरि पनि कार्यकाल बढाउने कसरतमा देखिएका छन् । नेताहरुको कार्यशैली र व्यवहारले फेरि पनि अर्काे संकट सामना गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीलाई करिब दुई तिहाई मत दिएकोमा अहिले पछुताउने नेपाली जनताले विकल्पमा फेरि पनि कांग्रेस नै ठानेका छन् । तर कांग्रेसको गति र मति यही रह्यो भने फेरिपनि नागरिकको त्यो चाहना पूरा हुने अवस्था छैन् ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तहमा रहेका अहिलेका नेताहरुका कार्यशैली र व्यवहारले उनीहरुले पञ्चायतको ३० वर्षे शासनकाल कसरी कटाए भन्ने लाग्छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेका शेरबहादुर देउवा सत्ता र शक्तिका लागि जोसँग जस्तोसुकै सहमति र सम्झौता गर्न नहच्कनेमा कहलिएकामा पर्छन् । उनको विगत ज्यादै डरलाग्दो छ । राजा ज्ञानेन्द्रको उक्साहटमा बहुमतको संसद विघटनको सिफारिश गरे । पछि उनैले निर्वाचन गराउन नसकेको भनी अक्षमको पगरी गुथाएर अपदस्थ गरे । केही समय आफैं सत्ता चलाएका ज्ञानेन्द्रले फेरि उनै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए । देउवाले फुरुङ्ग भएर प्रतिक्रिया दिइहाले– गोर्खाका राजाले न्याय दिए । सँगसँगै दूधको साक्षी बिरालो भने जसरी तत्कालिन एमाले नेतृत्व पनि आधा प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै सत्तामा हिस्सेदारी खोज्न बुर्कशी मार्न थाल्यो ।
देउवा र केपी ओलीहरुको त्यो चोचोमोचो पछिल्ला दिनमासमेत कायमै छ । ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारमा देउवा सबैभन्दा विश्वासिला र भरोशामन्द पात्र बनेका छन् । “काले काले मिलेर खाउँ भाले” भनेजस्तो गरी ओली र देउवा भागबण्डामा सत्ता साझेदारी गरिरहेका छन् । जबकी नेपाली जनताले यसपाला देउवालाई विपक्षमा बस्ने आदेश दिएको छ । तर देउवा त्यो मान्न तयार भएनन् ।
देउवा पद र शक्तिका लागि मरिहत्ते गर्ने पात्र भएको दुनियाँलाई ज्ञात छ । जनादेशको खिलाफ नै उनी सर्वाङ्ग हुँदासमेत कांग्रेसमै थोरै विवेक भएका नेताहरु चाहिं तैं चूप मै चूपको अवस्थामा छन् । प्रदीप गिरिदेखि गगन थापासम्मले यो गहन विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिने आँट गर्दैनन् । किनभने गिरिलाई फेरि पनि कांग्रेसबाट सांसदको टिकट चाहिएको छ भने गगनलाई त धेरै चिज । गगन, प्रदीप पौडेल मात्र होइन विश्वप्रकाश शर्माहरुसमेत देउवाको गलत प्रवृत्तिको खुलेर आलोचना गर्दैनन् । किनभने भोलि देउवासँगै बार्गेनिङ गरेर पद जो लिनु छ ।
तर युवा पुस्ताका नेताहरु एकजुट भएर आएनन् भने विस्तारै नेपाली कांग्रेस असान्र्भिक हुने खतरामा छ । युवा जमातको आकर्षण नभएसम्म अब राजनीतिमा सफलता पाउन गाह्रो छ । कम्युनिष्टप्रति जनतामा निराशा र आक्रोश छ, तर विकल्पमा कांग्रेस पनि सक्षम छैन । अहिलेको युवा पुस्ता देउवाको नेतृत्वको कांग्रेस चाहन्नन् । देउवाले विगतमा गरेका यावत् गल्तीको फेरिस्त युवा पुस्तासँग सुरक्षित छन् । कम्युनिष्टको विकल्पमा कम्युनिष्टसँग सत्ताको भागबण्डा गर्न लाज नमान्ने देउवा नेतृत्वको कांग्रेस कसैले चाहँदैन । देउवाको यही सोच र प्रवृत्तिले फेरि पनि हातमा आइसकेको सत्ता फुत्किने अवस्थामा छ ।
नेपाली जनताको चाहना पूरा गर्ने हो भने अब कांग्रेस युगसुहाउँदो बन्नैपर्छ । युग अनुकुल हुनका लागि देउवा प्रवृत्ति परास्त भएको कांग्रेस बनोस् भन्ने हो । देउवा प्रवृत्तिलाई साँच्चै निमिट्यान्न पार्ने हो भने स्वयं कांग्रेसजन अग्रसर हुनुपर्छ । अझ युवा पुस्ता । अहिले धेरैले आशा र विश्वास गरेका कांग्रेस नेतृत्वमा देखिएका युवा पुस्ताले गम्भिरता र संवेदनशीलता देखाएनन् भने आउने दिन थप भयावह छ । कमसेकम युवा पुस्ताले एकताबद्ध भई नेपाली कांग्रेसलाई शुद्धता प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।
इतिहास सधैं दोहरिंदैन । अहिले भने कांग्रेसका लागि अनुकूल छ । कम्युनिष्ट नेतृत्वको दुई तिहाई नजिकको मत बेकामे भएको छ ।जनजीविकाका सवालमा नेकपा ज्यादै संवेदनहिन देखियो । जनमतको खिल्ली उडाउने काम लगातार भइरहेको छ । कोरोना जस्तो महामारीका बेलापनि उनीहरु सत्ता र अनियमिततामा डुबुल्की मार्नै तल्लिन रहे । त्यसैले कांग्रेसले केही नगर्दासमेत जनताले विकल्पमा आँखा दौडाएको अवस्था छ । तर त्यसका लागि विगतको तीतो अनुभवलाई बिर्सनु भएन । देउवाकै नेतृत्वमा फेरि पनि निर्वाचनमा जाने हो भने कांग्रेसको हविगत हिजोभन्दा कमजोर हुन्छ । यो केवल आरोपका लागि आरोप होइन, गाउँघरमा गएर जनमत लिए हुन्छ ।
देउवाले हिजो देखाएको सत्तामोह र पदलोलुपताले गर्दा आम मानिसमा गलत धारणा बनेको छ । तर यो कुरा देउवाका लागि प्रिय हुने छैन । साथै, देउवाको फेर समाएर भोलि पद पाउँला की भनेर ढुक्नेहरुका लागिसमेत अरुचिकर हुनेछ । तर आम जनता भने त्यही चाहन्छ । कम्युनिष्टको विकल्पमा कांग्रेस नै हो, तर देउवाले विश्राम लिनुपर्छ । यो अवसर हो कांग्रेसका लागि । व्यक्ति भन्दा ठूलो पार्टी हो । पार्टीलाई मजबूत बनाउने हो भने आम नागरिकको सोच र भावनाको कदर गर्नैपर्छ । त्यसका लागि उपयुक्त अवसर भनेको चौधौं अधिवेशन नै हो ।
बामदेवकै वरिपरी घुमेको सत्ता राजनीति १ दिन पहिले
आजभाेलि नै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न अध्यक्षद्वय सहमत १ दिन पहिले
सुरक्षा घेरामा संविधान दिवस मनाउने ओलीको बोलीमा सुशासन, व्यवहारमा कुशासन २ दिन पहिले
बामदेव प्रकरण : तत्काल पुनर्गठन गर्ने ओलीको चाहना, प्रचण्ड भने पर्ख र हेरको पक्षमा २ दिन पहिले
सेनाले खोल्यो कालापानी जाने घोरेटो बाटोको ट्र्याक ४२ मिनेट पहिले
सेनाले ग¥यो कङ्गो घटनाबारे छानबिन शुरु ४८ मिनेट पहिले
सशस्त्र प्रहरी बाह्रैमास कालापानी नजिक छांगरुमा बस्ने ५० मिनेट पहिले
बागलुङमा ७ हजार ८ सयले गरे कोरोना बीमा ५४ मिनेट पहिले
दम्पतीमाथि आक्रमण हुँदा श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमानकाे अवस्था गम्भीर १ घण्टा पहिले
आज थप १ हजार २०७ जनामा कोरोना पुष्टि ६ घण्टा पहिले
जुत्ता पोलिस गर्नेको कमाई महिनाकै १८ लाख ! १० घण्टा पहिले
चितवनमा हेटौँडाका कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु ९ घण्टा पहिले